Easy way to speak English (5) - Myanmar Network
Easy way to speak English (5)
Posted by Myo Myint Kyaw on November 2, 2011 at 15:59 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်လိုလွယ်လွယ်ပြောကြရအောင် ကဏ္ဍမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါ အလွယ်တကူသုံးလို့ရမယ့် စကားစုတွဲလုံး (phrase) တွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.
တစ်ခုခုကို လုပ်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးကို ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ I feel like ဆိုတဲ့ စကားစုတွဲ လုံးနဲ့ အစချီကာ နောက်ဘက် V-ing(gerund) လိုက်ပြီး ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- မုန့်ဟင်းခါး စားချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်၊ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ် စတဲ့ သဘောမျိုးမှာ အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းမျိုးနဲ့ ပြောဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကို မူတည်ပြီး V-ing အမျိုးမျိုး လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် မော်တော်ဆိုင်ကယ်စီးချင်စိတ် ဖြစ်နေတယ်။
ကျွန်တော် ပင်လယ်ကမ်းခြေကို သွားချင်စိတ်ပေါက်နေတယ်။
ကျွန်တော် သရေစာ စားချင်စိတ်ဖြစ်နေတယ်။
တစ်ခုခုကို လုပ်ချင်စိတ်မရှိဘူး။ လုပ်ဖို့ ဆန္ဒမရှိဘူး စသည့်ဖြင့် ပြောဆိုလိုတဲ့အခါမှာတော့ I don’t/ do not feel like နဲ့အစချီပြီး နောက်ဆက်ကတော့ V-ing လိုက်ရပါမယ်။ အောက်မှာပေးထားတဲ့ဝါကျတွေကို လေ့လာကြည့်ပါဦး
I don’t feel like leaving yet.
ကျွန်တော် ထွက်သွားချင်စိတ် မရှိသေးဘူး။
I don’t feel like comfortable talking about it.
အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြိး ကျွန်တော် အေးအေးဆေးဆေးပြောချင်စိတ်မရှိသေးဘူး။
ဖော်ပြထားတဲ့စကားစုတွဲလုံးကတော့ မလုပ်ဘဲမနေနိုင်တဲ့အကြောင်းကို ပြောတဲ့အခါမှာ သုံးရမယ့် အသုံးအနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ “မစားဘဲမနေနိုင်ဘူး၊ မသွားဘဲ မနေနိုင်ဘူး၊ မပြောဘဲ မနေနိုင်ဘူး၊” စသည့်ဖြင့် ပြောဆိုတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီအသုံးအနှုန်းနဲ့ ပြောဆိုရပါတယ်။ နောက်ဘက်ကတော့ V-ing(gerund) ပဲ လိုက်ရ ပါတယ်။ ဖော်ပြပေးမယ် ဥပမာဝါကျတွေကို လေ့လာပြီး မိမိစိတ်ကူးနဲ့ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို လေ့ကျင့်ပြောဆိုကြည့်ပါ။
I can’t help thinking about it.
I can’t help shopping so much.
ကျွန်တော် ဈေးဝယ်အရမ်းထွက်ချင်တာကို မလုပ်ဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
I can’t help working all the time.
ကျွန်တော် တစ်ချိန်လုံးအလုပ်မလုပ်ဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
ကျွန်တော်သူမကိုတွေ့တဲ့အခါ မပြုံးဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
I can’t help eating so much.
ကျွန်တော် အလွန်အကျွံမစားဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
I can’t help biting my nails when I am nervous.
စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အခါ လက်သည်းတွေကို ကျွန်တော် မကိုက်ဘဲမနေနိုင်ဘူး။
I can’t help singing when I have been bathing.
ရေချိုးတဲ့အခါ ကျွန်တော်သီချင်းမဆိုဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
I can’t help remembering the things you did.
ခင်ဗျားလုပ်တဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော် သတိမရဘဲ မနေနိုင်ဘူး။
ဖော်ပြထားတဲ့ စကားစုတွဲတွေကို လေ့လာမှတ်သားရင်း မိမိစိတ်ကူးနဲ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အစားထိုးပြီး အာသွက်၊ လျှာသွက် ပြောဆိုလေ့ကျင့်ကြတာပေါ့
Permalink Reply by Master Learner on November 3, 2011 at 11:57
ံHi! Your posts are very good for the beginners . But , in an article the word " Grammar"
has been " Grammer". I am reading your posts . Thank you!
Permalink Reply by 1z32bac4b8r2j on November 15, 2011 at 12:55
Permalink Reply by ShinMay Hsu on November 23, 2011 at 15:28
အကို ညီမက အခုမြင်နေရတဲ့page ကို save လုပ်လို့ရပေမဲ့ save လုပ်ရတာကြာလာတော့မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ အဲဒီတော့စာအုပ်ဝယ်ဖတ်မယ်ကြံတော့လည်း ဘယ်မှာရှာ၇မလဲမသိဘူး။ အဲဒါညီမအခက်တွေ့နေတယ်.... ဘယ်မှာဝယ်ရမလဲဆိုတာသိရင်တချက်လောက်ကူညီပါလားဟင်..... elementary ကနေစပြီးလေ့လာချင် ပါတယ်အကို.......
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on November 25, 2011 at 16:17
ဘာကိုပြောတာလဲမသိဘူး မရှင်းလို့ပါ ညီမရေ
Permalink Reply by zaw aung on November 26, 2011 at 19:59
u can find that kind of usage at the book, 'a practical approach to english by bawa thit u aung kyaw' and 'english elements of the language by sayar u thar no'. u can buy at any book shop. i have bought it from sarpay law ka5in pan so dan.
Permalink Reply by 000lxvbrj9cel on December 24, 2011 at 10:29
ဒီအတိုင်း save လုပ်တာထက် copy လုပ်ပြီး Microsoft ထဲမှာ paste လုပ်တာက ပိုသေချာပါကြောင်း အကြံပြုပါရစေ...
Permalink Reply by moeaye on November 26, 2011 at 2:33
Permalink Reply by 14iftjh71d4uv on November 30, 2011 at 18:11
Permalink Reply by 0llghc73y86cx on December 8, 2011 at 14:13
Permalink Reply by Aye Thandar on December 22, 2011 at 12:27
Permalink Reply by 2xfh28s58zr6t on December 22, 2011 at 17:43
Permalink Reply by 1tvu59ccj2avt on December 23, 2011 at 23:56
Easy way to speak English ကို စာအုပ်ထုတ်ထား ပါသလား သိချင်ပါတယ်ရှင့် 